ဘဲရစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝမ်းဘဲနှင့်မျိုးစဉ်တူ၊ မျိုးရင်းတူနှင့် မျိုးရင်းခွဲတူသော အခြားဝမ်းဘဲတစ်မျိုးလည်း ရှိသေးသည်။ ယင်းမှာ ဘဲရစ်ဖြစ်သည်။ ဘဲရစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲနေထိုင်သော ငှက်မျိုးမဟုတ်သော်လည်း အောက်တိုဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်အထိ လာရောက်နေထိုင်သောငှက်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒေသပြောင်း၍ လာရောက်နေထိုင်သော ငှက်များတွင် ဘဲရစ်သည် အများဆုံးတွေ့နိုင်သော ငှက်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ဘဲရစ်ကိုတွေ့နိုင်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်နှင့် အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ပို၍အတွေ့ရများသည်။
ဘဲရစ်၏ကိုယ်အလျားသည် ၂၂ လက်မရှိ၍ ဘဲရစ်ဖို၏အမြီးအတောင်များသည် သာမန်ဝမ်းဘဲ၏ အမြီးအတောင်ထက် လေးလက်မ ပို၍ရှည်သည်။ ဘဲရစ်၏ ကိုယ်ထည်သည် သေးသေးသွယ်သွယ်ရှိပြီးလျှင် လှပသည်။ လည်ပင်းရှည်ပြီးလျှင်အမြီးချွန်သည်။ အရွယ်မရောက်သေးသော ဘဲရစ်အဖိုသည် ဘဲရစ်အမနှင့်တူ၏။ ရေမှအထတွင် အတန်ငယ်ခဲယဉ်းသော်လည်း ပျံသန်းရာတွင်လည်း အလွန်လျင်မြန်သည်။ အတောင်ရိုက်ခတ်ရာတွင်လည်း လျင်မြန်ပြီးလျှင် သွားကြား လေသံကဲ့သို့ အသံထွက်ပေါ်သည်။
ဘဲရစ်သည် များသောအားဖြင့် ဆိတ်ညိမ်စွာ နေလေ့ရှိသော်လည်း ဘဲရစ်အမကမူ တခါတရံ အသံပြုတက်သည်။ ဘဲရစ်သည် အလွန်ကြောက်တတ်သော ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။ အကောင် ၂ဝ မှ ရာပေါင်းများစွာအထိ ရှိသော ဘဲရစ်အုပ်ကို ထုံးအိုင်၏အလယ်တွင် တွေ့တတ်ရာ သေနတ် ပစ်ဖောက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် တစ်အုပ်လုံး ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူမရောက်နိုင်သည့် လမုတောစိမ့်တောများ အတွင်း၌ နေ့အခါတွေ့ရ၍ ညဉ့်အခါတွင် မှော်များရှိသည့် တိမ်သော ရေချိုရေအိုင်များတွင် ကျက်စားသည်။ ဘဲရစ်ကို သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎)အလိုအရ "အနပ် အကူတာ အကူတာ" ဟုခေါ်သည်။ 
↑ BirdLife International (2013). "Anas acuta". IUCN Red List of Threatened Species 2013. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘဲရစ်&oldid=713563" မှ ရယူရန်